Doorashada Maamulka Ximan iyo Xeeb oo ka socota degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud – idalenews.com
Qabanqaabadii ugu danbeysay ee doorashada madaxtinimo ee maamulka Ximan iyo Xeeb ayaa saaka ka socota magaalada Cadaado ee xarunta maamulkaas,Ololaha doorashada madaxtinimo ee maamulkaas ayaa shalay lasoo gabagabeeyey kadib markii ay baarlamaanka maamulkaas hortageen 3 Musharax oo u taagan qabashada xilkaas.
Musharixiinta ayaa baarlamaanka ka hor aqriyey waxyaabaha ay u qabanayaan bulshada ku dhaqan deegaanada uu ka arimiyo maamulka Ximan iyo Xeeb,Musharixiinta ayaa ka dalbaday baarlamaanka oo isagu soo dooranaya qofka noqonaya madaxweynaha cusub ee maamulkaas iney codkooda siiyaan.
13 bishan June ee sanadka 2013-ka oo maanta ku beegan ayaa loo asteeyey iney doorashada madaxtinimo ee maamaamulkaas ay si rasmi ah uga qabsoonto magaalada Cadaado ee xarunta Ximan iyo Xeeb,shacabka ku dhaqan deegaanada uu ka arimiyo maamulkaas ayaa indhaha ku haya doorashada saaka ka bilaabanaysa magaalada Cadaado.
Mudanayaasha baarlamaanka maamulkaas ayaa xiligan kusii qulqulaya goobta ay doorashadu ka dhacayso oo ah xarunta baarlamaanka,masuuliyiintii hore ee maamulkaas ayaan ka mid ahayn Musharixiinta u taagan qabashada xilkaas,waana doorashadii 3-aad ee ka dhacday deegaanada Maamulka Ximan iyo Xeeb.
Maamulka Ximan iyo Xeeb oo doortey Madaxweyne Cusub